24 May 2013 - Fante Onli
Friday Sermon: Khilafat-e-Ahmadiyya -
24th April 2013 - Fante Translation.
Ber a ͻkrantsee tashahud, tawwudh na Surah Al Fatiha wiee no, Hadhrat Khalifatul Masih V (Nyankopͻn mfa Ne mboa Kɛse no nhyɛ no dzen) kenkaan Kuran Krͻnkrͻn tsir eduonum esoun Surah Al Nur nyiyimu eduonum ebien (52) kɛpem eduonum esoun (57).
Allah Ɔsorsornyi No ka dɛ: “Agyedzifo no, sɛ wͻfrɛ hͻn kͻ Allah na No Somafo no hͻ dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ ma woebu hͻn ntamu atsɛn a, asɛm a wͻka ara nye dɛ ‘Yɛatse na yɛayɛ setsie’. Na woyinom na wobenya eyiedzi
“Na obiara a ͻyɛ setsie ma Allah ͻnye Ne Somafo no, na osuro Allah no, na ͻfa No dɛ ͻyɛ N’akokyɛm a Ɔbͻ no ho ban no, woyinom na wͻbɛyɛ nkunyimdzifo no”
“Na wͻdze Allah dzi nsew ka hͻn ntam a no mu yɛ dzen papaapa dɛ, sɛ wͻma hͻn ahyɛdze a, ampaara dɛ wͻbͻkͻ hͻn enyim. Ka dɛ, Mma hom nndzi nsew biara,; dza ohia ara nye setsie ankasa wͻ dza otsen ho. Ampaara dɛ Allah nyim dza hom yɛ nyinara”
“Ka dɛ: Hom nyɛ setsie mma Allah na hom nyɛ setsie mma Somafo no. Mbom sɛ hom dan hom ho kͻ a, ͻno n’adzesoadze bɛda hom do, na w’adzesoadze bɛda woara wo do. Na sɛ hom yɛ setsie ma no a, hom benya kwankyerɛ pa no. Na asodzi biara nnda Somafo no do gyedɛ Asomasɛm no ne ka ͻbɛda edzi no nko”
“Nyankopͻn ahyɛ hͻn a wͻka hom ho a wͻgye dzi na wodzi dwumapa dɛ Ɔbɛyɛ hͻn Adzedzifo wͻ asaase yi do dɛ mbrɛ Ɔyɛɛ hͻn Adzedzifo fiir nkorͻfo a wͻdzii hͻn enyim kan no, na ampaara Ɔbɛma hͻn som no a Ɔasa mu eyi esi hͻ no etsintsim ama hͻn na afei so ͻyɛ dzen dɛnara a, Ɔbɛsesa ama hͻn bambͻ na asomdwee wͻ hͻn suro ekyir. Wͻbͻsom Me, na wͻnnkɛfa biribiara abata Mo ho. Na afei obiara a ͻbɛyɛ otsiafo dɛm ekyir no woyinom na wͻyɛ etuatsewfo no”
“Na hom nyɛ asͻr na hom ntua ntoboa (Zakat) na hom nyɛ setsie mma Somafo no, ama woeehu hom mbͻbͻr”
Da soronko bi wͻ hͻ ma Ahmadiyya Kuw mba a osi wͻ Ebͻwbira bosom mu. Mekyerɛ Ebͻwbira ne da a ͻtͻdo eduonu esoun (27th May) a wͻato no dzin Khilafat Da na Kuw yi kaa dɛm da yi; modͻ mepɛ dɛ me kasapͻw gyina iyi do ndɛ. Dɛmbrɛ Ebͻwbira ne da a ͻtͻdo eduonu esia yɛ akomamu aseda da ma Ahmadiyya Muslim Mba yi na ͻwosoow dodowara hͻn gyedzi yi na ͻmaa gyegyeegye baa binom hͻn akoma mu yi, Ahmadiyyafo hͻn atanfo dze ͻyɛɛ da a wͻdze honamyaw, nkokohweasee na amandzehun bͻtoo kuwmba no do.
Ahmadiyya abakͻsɛm kyerɛ hɛn ayɛyɛdze na dwuma a atanfo dze edzi hɛn a wͻakyerɛw a sɛ ekenkan a bobor bͻbow wo, dɛ nyimpa dasanyi botum ayɛ mberɛw ara a ma aba no dɛ ber a Anohoba Mɛsia (ANN) nyaa ne beebi kͻree, otuu sa a ͻtse dɛm wͻ Ahmadiyya Kuw yi do. Ɔyɛ dɛn yɛ ma dɛm dwumadzi yi a ͻyɛ awerɛhow yi hɛn enyi bɛda dɛ nkorͻfo a wͻtow kͻ Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) do dɛ ͻyɛ ehumbͻbͻr ma wiadze nyinara yi botum ayɛ dɛm.
Nkorͻfo nam hͻn tsebea do dzi dwuma na mbom ͻyɛ Ebͻwbira 27, 1908, yehun Allah Ne mbra kɛse a ͻdaa noho edzi eso yehun N’anohoba a Ɔbͻ2 no dɛ Ɔrehyɛ no mã. Dɛm da yi, Ebͻwbira 27, 1908 bae dɛ wͻrobͻ asomdwee na bambͻ ho nsɛm dawur a ͻfa no Ahmadiyya Kuw ho. Dɛm da yi dze nsɛm dɛw a ͻhyɛɛ Nyankopͻn Ne bͻhyɛ a Ɔnye Anohoba Mɛsia (ANN) no hyɛɛ no mã na ͻhyeew Ahmadiyyafo hͻn atamfo hͻn ebufuw na hͻn enyiwuii, na ͻbae so dɛ da a otutuu hͻn akͻhwi enyigye na dɛwdzi.
Ebͻwbira 27 nnyɛ da ara kwa mma Ahmadiyya Kuw no. da yi yɛ da a ohia papaapa na ne hia a ohia kͻ do yɛ kɛse sɛ yɛhwɛ nkͻmhyɛ a Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn Muhammad (NNN) hyɛɛ no a. Muslimfo dodowara a wͻwͻ wiadze dze nnuho na ayɛwdzi to hͻn enyi hwɛ Ahmadiyyafo, nokwar ͻwͻ dɛ yɛka dɛ wͻdze ebufuw na ͻtan kɛse vhwɛ hɛn dɛ yɛatsintsim Khilafat Adzedzi no wͻ hɛn mu.
Wͻabͻ mbͻdzen mpɛn pii dɛ wobetsintsim Khilafat Adzedzi no wͻ hͻn mu naaso onnsi kwaa n’asekyerɛ kɛse nye dɛ wͻannyɛ setsie amma Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn Muhammad (NNN) n’akwankyerɛ no a no mu da hͻ kann no. Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn Muhammad (NNN) aka dɛ, sɛ Anohoba Mɛsia na Imam Mahdi ba a, wͻmfa yaw na amandzehu mu mbͻdzenmbͻ biara a ͻfata wͻnkͻ ne nkyɛn, wͻ ber a wͻrowea hͻn nan korma do wͻ esukwankyeaba bo do (glaciers of ice) sɛ ohia dɛ ͻba no dɛm a, na wͻmfa me nkyia, asomdwee nkyia mma no.
Afei Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) kaa kyerɛ obiara so dɛ sɛ wohu nsɛnkyerɛdze no dɛ wͻrehyɛ ma a onyia no a ͻdɛ ͻtse dɛm no yɛ nokwafo. Nsɛnkyerɛdze no a Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) bobͻͻ edzin no twa fa sor na asaase ho. Yɛtaa bobͻ edzin wͻ hͻn mboano mu eso yɛdze to hͻn a wotsia hɛn no hͻn enyim~ mbom ber yi dze ͻrennka ho hwee. Mbom ͻyɛ mbusu kɛsenara ma hͻn a wͻnngye nndzi dɛ ͻnam wiadze na ahonya, anaa Muslim sunsum tumdzifo na nwomahufo no ntsi anaa dɛ wͻmmfa hͻn adwen nnkͻ do anaa wommbu Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) n’akwankyerɛ no ntsi, nnyɛ dɛ wͻnngyee nyia no a ͻdze too no do dɛ ͻyɛ Anohoba Mɛsia na Imam Mahdi nko bi, mbom hͻn aban afa tum abͻ hͻn bo dɛ wͻka kasafi to ͻhotseweefo yi a Nyankopͻn asoma no yi do.
Nokwar nye dɛ, hͻn ndzeyɛɛ yi yɛ bͻn. Na iyi nyinara, yɛdze dɛ wonyim no mapa dɛ ber yi a yɛwͻ mu yi dze nkekamu robͻ no dawur ma hͻn a wͻpɛ dɛ wotsie dɛ dɛm mber nye mber a nyia no a ͻwͻ dɛ ͻba no, yi n’enyim. Nyankopͻn akyerɛ nsɛnkyerɛdze nyinara a ͻfua iyinom ekyir na Ɔkͻdo da nsɛnkyerɛdze edzi, mbom nkorͻfo yi gyina hͻn ananasa do tsia nyia Nyankopͻn asoma no yi. Dwumadzi biara a Ahmadiyyafo hͻn atanfo dzi tsia hͻn no Allah dze mpͻnse fofor ba hͻn do. Mbom hͻn tsimtsim na ntsɛn tum yɛ dzen ara ma wͻmmpɛ dɛ wͻbɛgyae dɛ wͻbͻko etsia hɛn. Dɛm ntsi sɛ iyi nnyɛ hͻn mbusu kɛse a nna ͻyɛ ebɛnadze na ebɛnadze na yebotum aka dɛ ͻyɛ?
Kwan biara do no, me kaa dɛ dɛm da yi hia papaapa na Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) noara akasa afa ho wͻ no nkͻmhyɛ no, no mu kor mu. Ber pͻkyee no dze ͻannka, mbom nokwar mu, dɛ ͻdze too gua dɛ obi reba a ͻbɛyɛ nyia ͻkrͻn na ͻyɛ no dͻfo nokwarfo sen obiara na ͻno na ͻbɛba dɛ Anohoba Mɛsia no na ͻno n’ekyir no ͻkaa dɛ Khalifafo (Edziadzefo) bɛhyɛ ase, ͻhyɛɛ nkͻm wͻ dɛm da yi ne mbaa ho. Dɛm dza nna ebɛnadze na ͻyɛ ehiadze papa sen dɛ Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn noara dze asɛm bi bͻto gua.
Nkͻmhyɛnyi n’enumkasa bi a Hadhrat Huriara (Nyankopͻn N’enyi ngye no ho) kaa dɛ Nyankopͻn No somafo no kaa dɛ: “Akͻmhyɛfo dwumadzi nye hom bɛtsena akɛpem ber a Allah pɛ. afei Obeyi efi hͻ na Adzedzi (Khilafat) a ͻnam Akͻmhyɛfo dzwumadzi do bɛhyɛ ase, na afei ber a Allah pɛ no Obeyi dɛm ayɛmuyiedze yi so. Afei ͻnam Ne Kasanhyɛ do ahendzi bͻn bͻsoɛr a ͻbɛma nkorͻfo edzi awerɛhow na wͻabͻm, na sɛ dɛm ber yi ba ewie a, dɛ mbrɛ Nyankopͻn Ne Kasanhyɛ ber so tse no tumkaber (despotic) ahendzi bͻsoɛr kɛpem ber a Nyankopͻn N’ehumbͻbͻr bodwir dze dɛm etsiͻdzen na ndzebͻn aba ewie. Afei bio, Khilafat a ͻnam Akͻmhyɛfo dwumadzi do betsim” na ͻkaa wie no Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn yɛɛ komm.
Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) n’enumkasa yi enyi da hͻ kann, odzi kan Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) kasa fa Akͻmhyɛfo dwumadzi ho na ͻkasa fa Adzedzi ntoatoado (Khilafat-e- Rashida) wͻwͻ kwankyerɛ papa no a wͻbͻkͻ do wͻ Akͻmhyɛfo dwumadzi no kwan do no, na wiadze hunii dzii ho dase, mbrɛ Adzedzifo baanan no a wodzii kan no a wͻtaa frɛ hͻn Khilafat-e-Rashida no wͻtwee hͻnho fii wiadze ahendzi na hͻn akɛsedze na enyimnyam ho. Wͻdze botae kortsee dzii dwuma, dɛ wobedzi dwuma a Allah pɛ na wͻdze dɛm botae yi sii enyiwa do dze dzii dwuma dɛ wͻyɛ Adzedzifo. Afei so, wiadzemba hun mbrɛ hͻn kasaa biara a Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) aka no baa mu ber a ͻkaa dɛ mber bɛba a ahendzi bͻkͻ do na mber bi so n’ano bɛbrɛ adze kakra na mber bi so n’ano bɛyɛ dzen wͻ dza wͻdze yɛ nkorͻfo do.
Dɛm ntsi yɛkenkan abakͻsɛm a yehu dɛ Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) n’anomu nsɛm hyɛ ma wͻ dɛ Khilafat-e-Rashida betsimii na ahendzi so a ne fabi yɛ dzen no yehun ayɛyɛdze na ndzeyɛɛ bͻn a abͻrdo. Ahenfo no a wͻbae no nna wͻbͻtͻ akͻ wiadze na ndzɛmba pii do sen dɛ wͻbͻtͻ akͻ nyamesom do. Afei Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) kaa dɛ, dɛ mbrɛ osi daapem no, Nyankopͻn hu N’abͻdze mbͻbͻr, na mber pii a wͻkͻ sum mu no, Nyankopͻn N’ehumbͻbͻr no dwir na Ɔdze ayɛyɛdze na ndzeyɛɛ bͻn no ba ewie. Na Khilafat a ͻnam Akͻmhyɛfo dwumadzi mu no wͻdze bͻbͻ adze bio. Na afei ͻtaa tsinkomm dɛ mbrɛ w’aka no wͻ Hadith no mu no.
Obiara botum dze dɛm Hadith yi akͻ adwendwen mu na obohu dɛ Nkͻnhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) nkͻmhyɛ a ͻfa no Khilafat-e-Rashida ͻbaa mu, afei so ne nsɛm a ͻkyerɛ dɛ ahendzi bɛba a no tumdzi ano bɛbrɛ adze kakra, na afei ahendzi so a no tumdzi ano bɛyɛ hyew no, ne nyinara aba mu. Sɛ ͻtse dɛm a ͻbɛyɛ dɛn bɛyɛ dɛ nyimpa n’adwen mu bɛyɛ no konsee wͻ Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) ne nkͻmhyɛ ne fa a ͻdze kͻ ewie no? dɛm ntsi ber a nsɛnkyerɛdze nyinara ahyɛ ma na Nyankopͻn so aka no wͻ Kuran Krͻnkrͻn mu dɛ: “Ɔnye nkorͻfo fofor bi a wofi hͻn mu a wonnyaa nye hͻn nnka mbͻͻ mu. Na Ɔno nye Otumfo Nyansafo No”
Sɛ yɛredan no aka asɛm kor no ara a, yɛbɛka dɛ Allah bɛhyehyɛ ndzɛmba a ͻbɛma Khalifa a ͻnam akͻmhyɛfo dwumadzi kwan do bɛba. Allah Ɔsorsornyi no ka dɛ: “Ɔyɛ Otumfo, Nyansafo no”. Dɛm ntsi sɛ Allah Tum, Ɔno a Ne Nyansa twa adze nyinara mu no, sii no gyina, na N’ehumbͻbͻr tuu ntsen no, Muslimfo no wͻgyee hͻn fii ahenfo ayɛkayɛkafo no nsa mu na Khilafat a ͻnam akͻmhyɛfo dwumadzi kwan do Ɔdze bͻbͻͻ adze dɛ mbrɛ Noara Ɔpɛ no. Dɛm ntsi hɛn Ahmadiyyafo, hɛn tsir ayɛ yie papaapa osiandɛ yedzi dase dɛ Nkͻmhyɛnyi Ne nkͻmhyɛ ne fa a odzi kan no ͻyɛ nokwar na yɛwͻ gyedzi wͻ mu, na yeehu dɛ ahyɛ ma na yɛyɛ nkorͻfo no a yɛgye nkͻmhyɛ ne fa no a odzi ewie no dzi. Yɛgye dzi mapa dɛ nkͻmhyɛ no ne fa no a ͻtse dɛm no so aba mu.
Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) ne Hadith bi so wͻ hͻ a otwa fa nsɛntsia bi a ͻwͻ Sura Juma’ah mu. “Hͻn nye nkorͻfo fofor bi a wofi hͻn mu a wonnyaa nye hͻn nkaa mmbͻͻ mu. Na Ɔno nye Otumfo, Nyansafo no”. Sɛ yɛhwɛ Allah Ne nsɛm yi a, na yɛhwɛ wiadze yi ne tsebea mu a, na yɛhwɛ nsɛnkyerɛdze yi a aba mu ti a, yɛagye hɛn aber do Imam yi edzi, ͻno a wͻdɛ ͻbɛba no. nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) ne kasae bi mu no, ͻdze mann Anohoba Mɛsia (ANN) no frɛɛ no “nabeeullah”, anaadɛ Ɔsomafo na Nyankopͻn Ne Nkͻmhyɛnyi. Afei Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) no aka bio dɛ emi na Anohoba Mɛsia (ANN) hɛn ntamu no Nkͻmhyɛnyi biara nnyi mu. Afei sɛ yɛhwɛ nyiyimu anan no a ͻwͻ Sura Juma’ah a, “wa aakhareena minhum”, Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) no kaa dɛ onyia no a wobeyi no ber bi a ͻreba no bɛyɛ dɛ mbrɛ ͻnoara so sii baa wiadze.
Sɛ yɛreka no bio a, nyimpa no a nkyɛ ͻwͻ dɛ ͻba no a ͻyɛ Anohoba Mɛsia (ANN) no dze ͻdͻ a onnyi kabea bͻdͻ Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN), na ͻbɛyɛ dɛ no sunsum na obenya abͻdzin a ͻdze Nkͻmhyɛnyi, sɛ ͻba wiadze yi mu a. Ber a ͻrekyerɛ dɛm nyiyimu a ͻwͻ Sura Juma’ah mu no, nna Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) dze ne nsa ato Hadhrat Salman Farsi n’abatsir na ͻkaa dɛ nyia a ͻbɛba wͻ nda a ͻwͻ ekyir no, obefi dͻm no mu na ͻnnkɛyɛ Arabnyi.
Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) kaa asɛnkyerɛdze no a ͻfa no gyedzi ne nyewee a wͻatwe kͻ sor noho noho. Iyi yɛ asɛnkyerɛdze ma mber a dɛm Ulema, Muslim asͻfo na nwomahufo wͻgye to mu na wͻpem do dɛ aber a Anohoba Mɛsia (ANN) no daa no ho edzi no, nna Muslimfo hͻn gyedzi nndzi mu koraa; ͻyɛ dɛ gyedzi ayew nwionwion efi wiadze. Dɛm ntsi hͻn nyinara hu dɛ nsɛnkyerɛdze nyinara aba mu. Na ͻnam dɛ nsɛnkyerɛdze nyinara aba mu ntsi ͻka kyerɛ hɛn dɛ Anohoba Mɛsia (ANN) no a ͻwͻ dɛ ͻba no, ampaara ͻaba wͻ mber nara mu. Hwɛ, ma menkyerɛ mu pefee dɛ, ͻnam dɛ Anohoba Mɛsia (ANN) ͻyɛ Khatamul Khulafa ntsi, wͻakrͻn no ekodu Khalifa sor sor gyinabew mu a ͻnam Akͻmhyɛfo dwumaddzi kwan do anaadɛ yɛbotum aka dɛ wͻdze Khalifa sor sor gyinabew no a ͻnam Akͻmhyɛfo dwumadzi kwan do no ato no do.
Ɔnam dɛ wͻayɛ no Anohoba Mɛsia a ahyɛ Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) n’asɛm no ma, na no dͻ no a ͻwͻ Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) ho so no ntsi, wͻdze Akͻmhyɛfo sunsum ama no. dɛm ntsi Khalifa nhyehyɛɛ a wͻdze Anohoba Mɛsia hyɛɛ ase yɛ ampaara dɛ ͻyɛ Nkͻmhyɛnyi ne dwumadzi kwan no. Na dwuma a ͻwͻ dɛ Khalifa dzi nye dɛ ͻbͻhwɛ dɛ Muslim Umma dzi Kuran Krͻnkrͻn no mu mbransɛm no do, na pɛrpɛryɛ na dwumadzi a ͻkͻ ma Allah na N’abͻdze no hyɛ ma, na Muslimfo dzi dɛm dwuma no. na yɛfa no ntͻyɛɛ kwan do dɛ ͻyɛ hɛn fasusu na yɛhwɛ dɛ yedzi do na kuwmba nyinara yɛhyɛ hͻn kͻn mu dzen ma wͻyɛ. Dɛm ntsi Khilafat-e-Ahmadiyya yɛ Khialfat-e-Rashida no nsͻwdo wͻ ekyir ber yi mu a yɛrekenyan Islam yi.
Ɔfa no Islam ne mber a odzi kan no, Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn tsee fii Allah hͻ ma ͻdze too gua dɛ Khilafat-e-Rashida bɛba ewie wͻ mber bi mu. Mbom ͻfa no Khilafat a wͻbɛhyɛ ase wͻ Islam ne nsakyeree wͻ mber a odzi ekyir mu no, ͻdze asɛmpa a ofi Nyankopͻn hͻ yi too gua dɛ Khilafat betsena hͻ afebͻͻ. Na wo nanom na wͻdze asɛmpa yi maa hͻn? Nokwar kotoo dɛm asɛmpa yi wͻdze mae na ͻbɛyɛ nokwar ama hͻn a wobedzi Khilafat nhyehyɛɛ do no. Hͻn a wͻbɛnantsew nyamesuro na tseneneeyɛ akwan mu na wͻayɛ ndzeyɛɛpa na wͻbͻkͻ do ara ama hͻn asͻryɛ edzi mu.
Nkorͻfo pii wͻ hͻ a wͻbͻdͻm Ahmadiyya Kuw yi, mbom ͻnam dɛ wͻnnyɛ hͻn ahyɛdze mma Khilafat-e-Ahmadiyya ntsi Allah Ne Nhyɛsɛm ma wͻtsew hͻnho fi Jama’at-e-Ahmadiyya mu. Ana dɛm nkorͻfo yi a wͻtsew hͻnho fi Jama’at yi mu yi ma hɛn mpuntu mu kankͻ tͻ nsu mu anaa? Dabida! Sɛ nyimpa a ͻtse dɛm kor fi mu a Nyankopͻn dze dͻm hyɛ ananmu. Sɛ wotwitwa dua ne mbayewa no a ewuwu anaadɛ wͻsusͻw do a, ne nsunsuando nye dɛ nhataa ebunebun na mbayewa a ahoͻdzen wͻ mu fefɛw piinara. Ɔnam dɛ ͻyɛ Nyankopͻn Noara N’anohoba dɛ Khilafat ne nyɛɛ wͻdɛ ͻkͻdo ntsi, Nyankopͻn Noara agye ato No do dɛ Ɔbͻsusuaw na Ɔadͻw ho. Ɔnnkɛba no dɛ Nyankopͻn, Ɔsorsornyi no nnkͻhwɛ ma nkͻmhyɛ a nyia Ɔdͻ No mapa na ͻda N’akoma ho papaapa hyɛɛ no ͻba mu. Nokwar mu nokwar, dɛm nkͻmhyɛ yi aba mu na ͻbͻkͻdo ara ahyɛ ma.
Ampa, ͻyɛ nokwar dɛ dɛm ahohiahia ber yi tum ba ber a hͻn a hͻn gyedzi yɛ mberɛw na hͻn a wotsia Ahmadiyya hyɛ ase dwen dɛ afei Ahmadiyya robͻkͻ n’ewie mbom Allah Ne nsɛnkyerɛdze wͻ mboa ho ba a Ɔgye Jama’at yi fi ahokyer mu. Awerɛhowsɛm a ne saso nnsii Jama’at yi mu nye, nokwar nye yi, ber a Anohoba Mɛsia (ANN) nyaa ne beebi koree. Atanfo no hͻn enyi gyee na Kuwmba no hͻn akoma tuu dodow, mbom nna Anohoa Mɛsia (ANN) no roboaboa dͻm no ho wͻ mber pii dɛ ͻkaa kyerɛɛ hͻn a Allah aka akyerɛ no mpɛn pii dadaw dɛ no wu ber abɛn. Mbom wͻaka dɛ onnyi dɛ ͻhaw hͻn anaa wonya abagow. Anohoba Mɛsia (ANN) no kyerɛɛw iyi wͻ no buukuu a ͻtoo ne dzin “The Will” (Ɔdabaa). Na ber a ͻkyerɛɛw dɛm no, dɛ ͻnnkɛkyɛr na oefi wiadze yi mu no, ͻkyerɛɛ dza wͻbɛyɛ wͻ sunsum mu, sikasɛm mu na mbrɛ wͻbͻtoto ndzɛmba na osii no tadua dɛ Kuw no, nokwar mu, betsim na ͻakͻdo afebͻͻ.
Ɔkaa kyerɛɛ Kuwmba no dɛ mma ͻnnhaw hͻn mu biara osiandɛ Allah ahyɛ no bͻ dɛ Ɔbɛma Kuw no ayɛ prͻmprͻm, osiandɛ iyi nye Kuw no a Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) ͻkaa nsɛmpa wͻ ho dɛ ͻbɛyɛ nkͻso no, eso Khilafat bɛsan etsim bio wͻ mber a ͻreba mu no. Anohoba Mɛsia (ANN) kyerɛɛw dɛ: “Nyankopͻn N’asɛm ka kyerɛ me dɛ atonyankyɛm pii besi na ͻhaw kɛse bodwir wiadze do, binom besi wͻ monkwa da mu na binom so wͻ mowu ekyir. Na Ɔbͻma Jama’at yi do na Ɔama ͻetu anamͻn pi. Ne fabi besi wͻ m’aber do, na binom so m’ekyir a”.
Ɔkͻdo ka dɛ: “Na ƆdaTum asorͻtow ebien edzi. Odzi kan no, ͻkyerɛ no Tum Nsa no wͻ N’akͻmhyɛfo hͻnara hͻn do. Ɔtͻdo ebien, sɛ Nkͻmhyɛnyi wu a, dza ͻyɛ dzen na nsɛmansɛma ma hͻn mu do na ͻtamfo no nya ahoͻdzen na ͻdwen dɛ ndzɛmba ayɛ bisibisi basaa na ͻtse ase pi dɛ afei Jama’at yi bͻtͻ nsu mu na Kuwmba nyinara so atͻ pitsi na hͻn ekyir biew no ebubu, na binom a wonnyi egyinanan no fa kwan dze hͻn kͻ abrͻdͻtwa mu, iyi na ͻma dza ͻtͻdo ebien no. Nyankopͻn kyerɛ No Tum Kɛse na Ɔhyɛ Kuw no a ohihim yi tsipia, wowaw hͻn na Ɔhwɛ hͻn do”.
Ɔkͻdo ka bio dɛ: “Ɔyɛ ehiadze papaapa ma hom dɛ hom bohu Nsɛnkyerɛdze a ͻtͻdo ebien no so, na ne Mbae dzi mu ma hom osiandɛ ͻyɛ afebͻͻ a ͻbͻkͻdo ekodu Atsɛmbua Da no. Na Asɛnkyerɛdze a ͻtͻdo ebien nnkotum aba gyedɛ mokͻ ana. Na sɛ mokͻ a, Nyankopͻn dze Nsɛnkyerɛdze a ͻtͻdo ebien bɛbra hom a ͻnye hom bɛtsena dɛ mbrɛ Nyankopͻn ahyɛ ho bͻ wͻ Brahin-e-Ahmadiyya mu no. Na dɛm bͻhyɛ yi nnkͻ mma emi. Mbom dɛm bͻhyɛ yi kͻ ma hom dɛ Nyankopͻn (rekasa kyerɛ me) se: “Mebɛma dɛm Kuw yi a wͻyɛ w’akadofo yi aka kuw nkaa no ahyɛ akɛpem Atsɛmbua Da”.
Dɛm no, ͻnam Allah, Ɔsorsornyi No N’adom ntsi, mfe ͻha nye enum ntamu yi yerehu Allah No bͻhyɛ a ͻhyɛ ma. Jama’at no kͻr ahokyer asorͻtow mu, na ͻnam Allah N’adom ntsi Jama’at no gu do dze ahoͻhar rokͻ enyim wͻ nkunyimdzi na yieyɛ mu. Sɛ atanfo no per dɛ wͻyɛ Jama’at no ayɛyɛdze na ewurkadze wͻ ͻman kor mu a, Nyankopͻn ko tsia iyi ma akwan nwanwa pueipuei wͻ ͻman fofor mu na mbrɛ ͻbɛyɛ ma kankͻ akͻ do. Nnyɛ iyi nko, ͻman a ahokyer aba mu ama hɛn no, hͻ so, Nyankopͻn kͻ do to Kuwmba no hͻn gyedzi mu. Na sɛ muhu iyi wͻ me bra mu a, medze me mberɛwyɛ to nkyɛn a, mbrɛ Allah Ɔsorsornyi No ma Kuwmba no kͻdo kͻ hͻn enyim wͻ kunyimdzi na yieyɛ mu, hͻn gyedzi nyin wͻ Allah mu dodow na hͻn gyedzi wͻ No bͻhyɛ mu kͻdo wͻ mudzi mapa mu.
Ampaara, Allah Ne nsa a wͻmmfa enyiwa nnhu kͻdo pia Jama’at no kͻ kan mpemdo mpemdo. Na obiara a Allah bɛyɛno Khalifa no, sɛ yɛyi tsebea biara a onyia no wͻ mu to nkyɛn mpo a, Ɔkͻdo kͻ no Mboa na Tsipia, Insha Allahu! (ͻyɛ Nyankopͻn Ne pɛ a). Na Allah kyerɛɛ dza ͻwͻ dɛ ͻyɛ na nsɛnkyerɛdze woyii odziadzenyi a ͻtͻdo enum wͻ Anohoba Mɛsia (ANN) ekyir no, na ͻdaa edzi pefee maa obiara dɛ Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn (NNN) no nkͻmhyɛ na asɛm asomafo nokwarfo a ͻetu noho ama a ͻyɛ Anohoba Mɛsia (ANN) kaa no, yɛ Nyankopͻn Ne Nhyɛsɛm dɛ Khalifa a ͻwͻ Nsɛnkyerɛdze a ͻtͻdo ebien wͻ Islam mu wͻ mber a aka ekyir yi mu yi bɛtsena hͻ afebͻͻ. Na dɛm Nhyehyɛɛ yi bͻkͻdo edzi dwuma wͻ ekyir yi so. Sɛ ͻyɛ Nyankopͻn Ne pɛ a (Insha Allahu).
Mbom ͻwͻ dɛ yɛdze to hɛn adwen do dɛ Allah akyerɛ ndzeyɛɛ a hͻn a wͻbɛnya Khilafat mu ndzinoa no. Allah asensan dɛm ndzɛmba yi wͻ Kuran Krͻnkrͻn ne nyiyimu a me kenkanee no na ͻyɛ ehiadze ma hͻn a wͻpɛ dɛ wonya Khilafat mu ndzinoa dɛ wobedzi do. Allah Ɔsorsornyi No ka dɛ: “Agyedzifo no, sɛ wͻfrɛ hͻn kͻ Allah na No Somafo no hͻ dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ ma woebu hͻn ntamu atsɛn a, asɛm a wͻka ara nye dɛ “Yɛatse na yɛayɛ setsie”. Nyankopͻn ka dɛ: “woyinom nye nkorͻfo a wobedzi nkunyim”. Dɛm ntsi, yehu dɛ kasa no nngyina som mapa ho nye nyamesom n’amandze nyɛɛ ho nko. Mbom, dɛ mbrɛ Kuran Krͻnkrͻn ka no, kwan kor do ͻkyerɛ mu yie; dwumadzi na asodzi a nyimpa wͻ ma Nyankopͻn, dɛm ara so na ͻkyerɛ mu yie dwumadzi na asodzi a nyimpa wͻ ma Nyankopͻn N’abͻdze.
Dɛm ntsi ha so, wͻabͻ nkorͻfo a wͻdze hͻn nsɛm kͻ asɛmdzibea wͻ aber a yɛwͻ nhyehyɛɛ wͻ Jama’at yi mu a wͻbͻ mbͻdzen biara dɛ wͻbesiesie wontwewontwe biara a ͻbesi ekuw ebien ntamu wͻ aber a “Sharia” a ͻyɛ Nyankopͻn Ne nhyehyɛɛ a ͻyɛ ebusuakuw nye awarfo (mekyerɛ kun na yer) ntamu. Sɛ asɛm bi si a ͻma yehu hͻn a adwen bͻn ba hͻn tsirmu na ahyɛse no wͻpow dɛ wobedzi kan bodua Jama’at nhyehyɛɛ do ayɛ nsiesie na mbom wͻtwe nsɛm no kͻ ͻman asɛmdzibea. Na sɛ woenndzi anaa woennya dza wͻrohwehwɛ a, na wͻsan hͻn ekyir ba Jama’at ne nhyehyɛɛ do. Iyi na ͻkyerɛ nyimpa no gyedzi na ne mberɛwyɛ. Nyankopͻn aka dɛ momin (gyedzinyi) nye nyia a ogyina Nyankopͻn na Ne Somafo nsɛm do yɛ nsiesie. Na Jama’at nhyehyɛɛ bͻ mbͻdzen biara na ͻwͻ dɛ wͻbͻ mbͻdzen dɛ, wͻbɛma hͻn atsɛnbu biara begyina Allah na Ne Nkͻmyhɛnyi mbransɛm do.
Me pɛ dɛ mobu asͻrmba a sɛ wͻdze asɛm bra hͻn a wonnya ber nhwehwɛ asɛm no mu nnkͻ kan yie na wonntum nngyina Nyankopͻn na No Somafo mbransɛm do mmbu atsɛn. dɛm nkorͻfo yi yɛ bͻn na wͻnam do pam nkorͻfo fi Jama’at nhyehyɛɛ nye Khilafat nkyɛn. Nyankopͻn ahyɛ Khilafat dɛ onsiesie wontwewontwe wͻ pɛrpɛr kwan do. Siesie Jama’at no enyi ara ma aba no dɛ Khalifa no nnkotum akͻ beebiara akͻdzi asɛm. na dɛ mbrɛ Jama’at no gu do rinyin no, dɛm ahokyer yi bͻkͻ do ara aba. Dɛm ntsi, edzibewdzifo a wͻdze dɛm dwumadzi yi ahyɛ hͻn nsa dɛ wonsiesie nsɛmansɛma no, sɛ wͻmmfa nyamesuro na tseneneeyɛ annyɛ edwuma a, ͻno wͻdze Khilafat n’enyim botwitwuu famu na wͻbɛyɛ adzebͻnyɛfo wͻ Nyankopͻn enyim na wͻayɛ Khalifafo adzebͻnyɛfo.
Dɛm ntsi metu “Qazis” (Atsɛnbuafo), dzibewdzifo na Ameerfo dɛ wͻmfa pɛrpɛryɛ mbua asɛm ama woetum ahyɛ Khilafat nhyehyɛɛ no dzen. Na ͻwͻ dɛ wͻbͻ hͻn ho mbͻdzen biara, aanyɛ dɛm a ͻno woyinom ma wͻyɛ dzibewdzifo naaso wͻbɛma Khilafat nhyehyɛɛ no atͻ pan. Nyankopͻn aka dɛ, nkorͻfo a wͻyɛ nkunyimdzifo nye hͻn a wͻbͻ mbͻdzen dɛ wͻbɛyɛ dza ͻwͻ dɛ wͻyɛ nyinara wͻ Nyame ntsi na wodzi Jama’at ne nhyehyɛɛ do dɛ mbrɛ ͻfata. Bio, m’aka akyerɛ hͻn a wodzi asɛm nyinara a wͻnnye Ameerfo nye Qazis dɛ wͻmfa Allah na No Somafo hͻn nkyerɛkyerɛ nyɛ edwuma. Mma hͻn nnyɛ biribiara a ͻbͻtwe hͻn efi pɛrpɛryɛ ho, anaa ͻnnkɛyɛ nyamesuro na tsenenee kwan ho. Hom mbͻ mbͻdzen dɛ bɛyɛ Khalifa n’ananmusifo. Sɛ hom annyɛ dɛm a, sɛ menyi dɛ asaase yi do ha ara mpo yɛbͻtwe w’aso no, ͻyɛ adze a obotum esi. Iyi n’ekyir no Nyankopoͻn Ne mpͻnse so wͻ hͻ ma hͻn. iyi yɛ asɛm bi a ͻyɛ hu yie a ͻwͻ dɛ banodzifo biara dwen ho yie.
Dɛ obi yɛ banodzifo no nnyɛ dɛ bɛgye gyinabew no ato wo do kɛkɛ, ͻwͻ dɛ ehyɛ no ho asodzi nyinara ma. Allah aka dɛ, sɛ eka dɛ eyɛ gyedzinyi anaa egye No Somafo dzi a nna egye to mu dɛ agye Anohoba Mɛsia (ANN) no edzi a, na abͻ anohoba dɛ bɛma wo gyedzi ehia akyɛn wiadze dwumadzi ahorow nyinara a, ͻno ͻwͻ dɛ edzi Allah na Ne Somafo no hͻn mbransɛm do. Dze biara a mber yi do odzikanyi bɛka akyerɛ wo no ͻwͻ dɛ idzi do na ͻwͻ dɛ edzi ahyɛdze a Khalifa a ͻtse egua mu no dze ahyɛ wo nyinara do. Sɛ hom annyɛ dɛm a, hom bͻhyɛ dɛ yɛbɛyɛ dɛm, yɛbɛyɛ dɛm nyinara bɛyɛ kwa. Nyankopͻn nyim hom akoma mu yie na Onyim dza hom ka na dza hom yɛ nyinara yie. Wͻ nhyiamu ber biara, yɛhyia bͻ anohoba ka dɛ asɛmpa biara a Khalifa bɛka akyerɛ hɛn biara yɛbedzi do, naaso nsɛm nketsenketse pii wͻ hͻ a yenntum nndzi do. Bio Kuran no mu mbransɛm nketsenketse bi wͻ hͻ a yenntum nndzi do na yɛnnyɛ dza ͻfata dɛ yɛyɛ.
Sɛ merema mfatoho a, nhyiamu a yɛayɛ no wͻ Atoɛe Mpoano (West Coast) ewie, yi hom nhwɛ mbasiafo no m’aka akyerɛ hͻn dɛ wͻnhyɛ ntar a ͻkata hͻnho nyinara na wͻnyɛ purda. Iyi yɛ Kuran no mu mbransɛm na ͻnnyɛ ahyɛdze hun bi kɛkɛ. Kuran ayɛ no nhyɛ a ͻwͻ dɛ yedzi do, naaso muhu dɛ wonndzi do papa biara dɛ mbrɛ ͻsɛ fata. Obinom a bɛyɛ dɛ banodzifo anaa Lajna mpanyinfo bi hyɛ hͻn ma wͻkata hͻn tsir do no gyaa hͻn akatsirdo no wͻ asͻrdan no mu ma hͻn a wͻresiesie asͻrdan no mu no sesawee.
Ɔyɛ ampa dɛ Islam aka dɛ mbaa na mbanyin nyinara nhwɛ hͻn ho yie na Anohoba Mɛsia (ANN) no tsitsir ahyɛ mbasiafo pɛpɛɛpɛ dɛ wͻnyɛ ahwɛyie wͻ iyi ho papaapa, osiandɛ mbanyin hͻn adzehwɛ wͻ mbrɛ ͻtse. Na dɛ mbransɛm yi wͻ hͻ ma mbaa na mbanyin nyinara. Ɔnnyɛ kaw pii biara dɛ yɛbedzi dɛm mbransɛm yi do anaaso dɛ ohia mbͻdzenbͻ kɛse bi dɛ yɛdze bedzi do na osiandɛ wiadze yi mu afɛfɛdze edzi binom hͻn tsir ntsi wobu hͻn enyi gu nsɛm yi do. Dɛm ntsi Nyankopͻn aka dɛ, sɛ hom bedzi M’ahyɛdze do na hom ayɛ dza ͻfata a, hom benya nkunyimdzi. Na sɛ hom enntum annyɛ dza ͻsɛ fata dɛ hom yɛ a, ͻno hom nhu dɛ Somafo no n’asodzi ara nye dɛ ͻbͻbͻ nsɛm no ho dawur akyerɛ hom. Sɛ hom bedzi mbransɛm no do dza, wͻbɛkan hom aka hͻn a woenya kwankyerɛpa no ho na wͻaka hͻn a wodzi hͻn Bai’at bͻhyɛ no do. Sɛ annyɛ dɛm a, yɛhu no dɛ Allah hu biribiara.
Mma yennya tsirmudɛw bi dɛ yɛayɛ Ahmadiyyafo ara kwa, anaa wͻawo hɛn ato Ahmadiyya Kuw yi mu fi dua mu ntsi. Anohoba Mɛsia (ANN) no ka dɛ Bai’at gyan no nnkyerɛ mfaso bi mma hom gyedɛ hom dze ndwumapa dzi ekyir. Afei Salat yɛ Nyankopͻn N’ahyɛdze a wͻaka dɛ ͻno nye botae a wogyinaa do dze bͻͻ ͻdasanyi, naaso iyi nyinara ekyir no hɛn banodzifo no bi yɛ ho akwadwer. Banodzifo no bi wͻ hͻ a sɛ wopue a wͻyɛ edwuma dɛ mbrɛ ͻfata na sɛ wͻ ha nso a wͻyɛ asͻr dɛ mbrɛ ͻfata na wͻyɛ no wͻ nyamesuro mu. Mbom hͻn ayernom bͻ hͻn sombo dɛ wͻnnyɛ asͻr wͻ fie.
Sɛ Nyankopͻn Ne mbransɛm a no mu tsitsiriw nye iyi no sɛ yenndzi do a, ͻno dza yɛka dɛ yɛbɛyɛ no nyinara yɛ kwa. Ɔwͻ dɛ hɛnara yɛyɛ hɛn mu nsakyer a ͻwͻ dɛ yɛyɛ na wͻama yeetum edzi mbransɛm nyinara do. Na hom mbͻ mbͻdzen dɛ hom benya Nyankopͻn N’enyigye. Iyi pɛ na obi yɛ a, wͻbɛfrɛ no dɛ ͻyɛ obi a odzi mbra a ͻkyerɛ dɛ “yɛatse na yɛdzi do” do, na woyinom ara so na wͻbɛyɛ momin (agyedzifo) na iyi ekyir no ankorankor abͻ mbͻdzen dɛ obotu anamͻn akͻ enyim wͻ gyedzi ekyir na woetu mpon wͻ ne gyedzi mu na wͻama n’adwen akͻ papayɛ do. Dɛm nkorͻfo yi na wobenya Khilafat no n’adom ho mfaso. Yɛbotum so aka dɛ, Nyankopͻn abͻ nkorͻfo a wͻtse dɛm yi anohoba na woyinom ara so na wobenya Khilafat noho adom ho mfaso, woenya bambͻ nye asomdwee. Na hͻn suro bɛdan ayɛ bambͻ na wobenya gyedzi na wͻayɛ atseneneefo, na wͻahyɛ nyamesom ahyɛdze ma na wͻremmfa biribiara mbata Nyankopͻn ho nsom no. Na wͻbɛyɛ ndaasefo ama Nyankopͻn N’adom mbordo mbordo no ͻnam Khilafat do dze adom hͻn no.
Dɛ mbrɛ m’edzi kan aka no, Nyankopͻn ayɛ Khilafat nhyehyɛɛ no wͻ Ahmadiyya Kuw yi mu na ͻnnkotum esi wͻ beebiara bio. Ahmadiyyafo tsir ayɛ yie, asiandɛ wͻagye Anohoba mɛsia (ANN) no edzi na woenya Khilafat adom. Dɛm ntsi hom nkaa no aber biara dɛ bͻhyɛ no wͻ gyinabew bi a ͻbata ho a ͻwͻ dɛ yedzi do ansaana dɛm adom yi aka hɛn nsa. Ɔkyerɛ dɛ yedzi nhyehyɛɛ no do a nna yɛbenya bambͻ wͻ Nyame N’adom ntsi. Na hɛn suro adan ayɛ asomdwee na iyi yɛ adze a hɛn Kuwmba pii enya ho suahun mpɛn pii. Mber yi mu no, hͻn a wͻnnyɛ Ahmadiyya Muslim mpo edzi ho dase dɛ mbrɛ Nyankopͻn si dan Ahmadiyyafo hͻn suro gyinabew yɛ no asomdwee. M’aka iyi ho asɛm mpɛn pii a wͻabɛsen kͻr.
Gyinabew a nna Ahmadiyya wͻ mu ansaana woriyi Khalifa a ͻtͻ do enum no, na dodowara, tsitsiriw Muslimfo a wͻnnyɛ Ahmadiyya no rotwɛͻn dɛ basabasayɛ bi besi Ahmadiyyafo hɛn mu. Naaso Nyankopͻn hyɛɛ N’anohoba a Ɔdze bͻͻ Anohoba Mɛsia (ANN) no mã wͻ kwan nwanwaso do ma wiadze nyinara ho boow hͻn. Wͻ M.T.A efir do a Muslimfo a wͻnnyɛ Ahmadiyyafo so hwɛ bi no, hunii kwan nwanwaso a Nyankopͻn faa do sesaa osuro gyinabew yɛɛ no asomdwee. Iyi yɛɛ hͻn nwanwa pii.
Muslimnyi bi a wͻagye dzin yie wͻ Pakistan a ͻyɛ Ahmadiyyanyi bi ne nyɛnko kaa dɛ, ͻwͻ mu dɛ menngye hom nndzi dɛ hom yɛ nokwarfo naaso mobotum aka dɛ Nyankopͻn No Tum na Ne Mboa wͻ hom do. Sɛ mohwɛ mfonyi a ͻkyerɛ kwan a hom fa do dze yii hom sunsum mu kandzinyi a ͻtͻ do enum no a. Iyi ara ma yehu binom wͻ hͻ a woehu nsɛnkyerɛdze nyinara ekyir no wͻda ho ara gyina hͻn dadaw mu. Atseetsee a Ahmadiyyafo gu do rokͻ mu wͻ Pakistan no kyerɛ dɛ wͻrenya mpontu na kankͻ. Na wohu dɛ daa nyinara hɛn mu retserɛw na yerenya nkunyimdzi ber na ber nyinara na hͻn mbͻdzembͻ na hͻn aperdzi a woridzi dɛ wobotum ertu Ahmadiyya ase koraa no nnyɛ nkͻdo. Wͻ kͻ do ara hwehwɛ kwan a wͻbɛfa do dze asɛe hɛn.
Na m’aka dɛ O! Ahmadiyya atanfo, hom nkaa dɛ hɛn Ewuradze na hɛn nyanko nye Nyankopͻn No a Tum nyinara yɛ Ne dze no. Ɔnnkɛma hom kwan ma hom edzi nkunyim da biara da. Siesiara dze Islam nkunyimdzi no bodua Anohoba Mɛsia (ANN) no do. Islam ne frankaa no ͻyɛ Anohoba Mɛsia (ANN) no n’akowa na obotu. Dɛm frankaa yi, hͻn a wobepagya no sor nye hͻn a wͻwͻ gyedzi a osi pi wͻ Khilafat nhyehyɛɛ no a ͻtse dɛ nkͻmhyɛ gyinabew no, hͻn a wͻdze hͻnho abata Khilafat ho na wͻyɛ dɛ ahondze a woesina hͻn nye Ahmadiyya Kuwmba; hͻn na woeso Allah N’ahoma no mu dzendzeendzen. Dɛm ntsi hom mbͻdzenmbͻ biara, hom ndzeyɛɛbͻn nyinara, kaansa wiadze yi mu aban bi taa hom ekyir mpo a, hom nnkotum aka Khilafat-e-Ahmadiyya ahyɛ, dɛ yɛbenya hͻn botae a osi hɛn enyi do anaa dɛ hom botum esiw Ahmadiyya mpontu ho kwan.
Ɔwͻ dɛ Ahmadiyyafo so hu dɛ, adze a ͻbɛma woenya nkͻdo nye dɛ; wͻbɛyɛ atseneneefo na wͻayɛ asͻr na wͻabͻ sika afͻr, iyi na ͻbɛma woenya Khilafat ho adom mbordo mbordo. Dɛm ntsi ͻwͻ dɛ Kuwba biara bͻ mbͻdzen dɛ ͻbɛyɛ n’asodzii a ͻda no do dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ ma woenya Nyankopͻn N’adom no bi. Afei, merebɛkan Anohoba Mɛsia (ANN) no ne akyerɛw no bi a ͻkyerɛwee faa hͻn a wͻdze hͻnho bata Khilafat ho no anaa hͻn a wͻwͻ Jama’at yi mu na wonya Khilafat ho nhyira na adom na wonya Nyankopͻn N’enyigye.
Anohoba Mɛsia (ANN) no ka dɛ:
“Na hom so hom nya Sunsum Krͻnkrͻn ne kyɛfa wͻ ͻdͻ nye ahotsewee mu dɛ hom bɛtsew hom akra ho. Sɛ ekwetsir Sunsum Krͻnkrͻn no a, obi ronntum nnya nyamesuro na woetum eyi honam akͻndͻ nyinara akwa. Hom mfa kwan a ͻkͻ Nyankopͻn hͻ no do na ͻyɛ kwan ketseketse bi. Mma hom nnya dͻ mma wiadze yi mu akͻndͻdze, ͻno wobeyi hom efi Nyankopͻn n’akwan no do. Hom mfa ahobrase su wͻ Nyankopͻn ntsi. Yawdzi a Nyankopͻn enyi gye ho no dzi mu sen enyigye a ͻhyɛ No ebufuw. Na nkogu a Nyankopͻn enyi gye ho no dzi mu sen nkunyimdzi a ͻtwetwe Allah N’ebufuwhyew. Ɔdͻ a ͻdze wo bɛn Allah N’ebufuwhyew ho na yi no tokyen. Sɛ rema w’akoma mu atsew na aba No hͻ a, Ɔbͻkͻ wo mboa ma ehu kwan a ͻwͻ dɛ efa do na ͻtanfo biara nnkotum edzi wo emin. Nnkɛnya Allah N’enyigye ara da gyedɛ iyi w’apɛdze akwa, etow w’enyigyedze nyinara gu, edze w’enyimnyam bͻ afͻr, epow w’ahonya, iyi wo bra tokyen, idzi emia wͻ No kwan mu a ͻbɛma asͻ owungyam ahwɛ.
Mbom, susuampaara dɛ efona wͻ dɛm nkodzen yi ho no, ebɛtsena Nyankopͻn Ne serɛ do dɛ abͻtoaba a enyi gye noho. Na wͻbɛyɛ hom adzedzifo wͻ anokwarfo a woetwa mu kͻ no do. Abow a ͻyɛ nhyira no wͻbͻ buei ama hom. Mbom nyimpa kumaabi na wͻka woyinom ho. Nyankopͻn kasaa kyerɛɛ me kaa dɛ: Taqwa (nyamesuro) yɛ dua a wodua no wͻ akoma mu. Nsu no a ͻma Taqwa nyin fɛɛfɛw no ͻno na ogu ture no mu nsu. Taqwa nye ntsin a sɛ ennya a ntseasee nnyi biribiara mu, na sɛ ogyina pintsinn a nnkɛyew biribiara. Ebɛn ndzenoa na ͻwͻ hͻ ma obi a ͻkɛhɛn ndzeyɛɛ hun mu dze n’ano famfa se dɛ ͻhwehwɛ Nyankopͻn wͻ ber a onnyi egyina nan wͻ n’Ewuradze nkyɛn. Hwɛ, meka no nkowar na pi si mu dɛ, nyia a ne gyedzi nye wiadze ndzeyɛɛ edzi afora kumaabi mpo no na ͻasɛe. Hell twe bɛn onyia no papaapa na adze a osusu ho nyinara nnyɛ Nyankopͻn dze- mbom binom yɛ Nyankopͻn dze na nkaa no so yɛ wiadze dze. Dɛm ntsi sɛ ewͻ wiadze ho ndzeyɛɛfi wͻ wo susudze biara mu a, wo som nyinara yɛ egyangyandze”.
Afei Anohoba Mɛsia (ANN) no dɛ:
Mbom, ampaara sɛ ewu owu a eku wo nyimpa dua efifidze a, ͻno bɛhɛn Nyankopͻn mu na Nyankopͻn nye wo bɛtsena. Na wobehyira fie a etse mu no na Nyankopͻn N’ehumbͻbͻr bodwir abamba no a ͻyɛ wo fie abamba no. Na kurowpͻn a dɛm nyinpa no tse mu no, wobehyira no. Sɛ wo bra na wo wu, wo ndzeyɛɛ na anamͻntu, na w’ayɛmuyie, na w’ebufuw yɛ Nyankopͻn nkotsee dze, na sɛ enya amandze anaa ekͻ ahokyer mu na annsɛ Nyankopͻn annhwɛ anaa annye no enntwa amodzin mu a-mbom ber a ewͻ dɛm nsͻhwɛ yi mu etwe bɛn Nyankopͻn a, ͻno meka no nokwar mu kyerɛ hom dɛ, hom bɛyɛ nkorͻfo a Nyankopͻn asɛmu eyi hom. Hom so wͻyɛ nyimpa dɛ mbrɛ moso meyɛ nyimpa na Nyankopͻn Noara a Ɔyɛ medze no yɛ hom dze. Dɛm ntsi mma hom nsɛɛ hom ndzeyɛɛpa.
Hwɛ, sɛ hom tͻ kͻ Nyankopͻn do pii a, ͻno hom mma menkaa hom-na medze Nyankopͻn Ne pɛ na N’enyigye ka dɛ hom bɛyɛ No nkorͻfo a wͻasɛ mu eyi hom. Hom mma Nyankopͻn Ne Kɛseyɛ nya ntsin wͻ hom akoma mu na hom ngye No Koryɛ nto mu nnyɛ dɛ hom dze hom ano famfa kɛkɛ, mbom hom mfa ndzeyɛɛ ntaa ekyir ama Nyankopͻn so dze ndzeyɛɛ akyerɛ N’ehumbͻbͻr na Ayɛmuyie wͻ hom do. Hom ntwe homho mmfi ndabraba ho na wͻmfa nokwar ehumbͻbͻr nkyerɛ nyimpa. Hom mfa kwan tsenenee biara do na woana nyim akwan yi no mu dza ͻbɛyɛ hom?
Hom ndzi ehurisi na hom enyi ngye dɛ agordzibea a wͻdze bɛn Nyankopͻn no atͻ pan. Ɔman biara kyerɛ no dͻ ma wiadze na dza Nyankopͻn enyi gye ho no wiadze mmfa n’adwen nnkͻ do. Mber aso a hͻn a wͻpɛ dɛ wodua abow yi mu no, dɛ wͻdze hͻn ahoͻdzen nyinara no, woyi hͻn tumyɛ kyerɛ na wonya adze no a enyi ber ho dɛ biribi no fi Nyankopͻn hͻ. Mma nndwen dɛ Nyankopͻn nkunyimdzi ayɛ hom dze. Hom nye aba no a Nyankopͻn dze Ne Nsa edua no wͻ asaase yi do. Nyankopͻn kaa dɛ dɛm aba yi benyin na oefi nhyiren abɛyɛ duapͻn. dɛm ntsi, nhyira nye nyia ͻgye dza Nyankopͻn aka no to mu na onnsuro nkotorka.
Nyankopͻn kasaa kyerɛɛ me na Ɔkaa dɛ menka nkyerɛ me Jama’at dɛ hͻn a wͻgye dzi na hͻn gyedzi no, wiadze ho enyigye nndzii no afora no, na nkͻnkͻnsa na akotooyɛ nnyi mu no na kwan biara mu ͻyɛ setsie no, dɛm nkorͻfo na Nyankopͻn N’enyi gye hͻn ho. Na Nyankopͻn ka dɛ, nokwar woyinom na hͻn gyinabew yɛ Nokwar no.
Kɛtseankyɛ Nyankopͻn ama hɛn nyinara ahyɛ Anohoba Mɛsia (ANN) ne pɛ na n’apɛdze nyinara a onyaa no ma, na Ɔama hɛn nyinara dze nokwar na setsie nkitahodzi a yɛnye Khilafat wͻ no etsim hͻ na Ɔdze ahoͻdzen a yɛbotum dze setsie a yɛto no abaw a onnhyia edwir hɛn ma yɛdze etsim hͻ, na Ɔama yeenya dza ͻkrͻn papaapa wͻ asͻryɛ mu, ama yɛakͻ do ara dɛ wͻdze Khilafat no akyɛdze kɛse behyira hɛn. Ɔnnyɛ hͻ.